Kulesi sihloko esithi "Ubuhle, Ukunakekelwa Komzimba, Ukunakekelwa Kwezithende" sizokutshela ukuthi ungafunda kanjani ukunakekela umzimba wakho nemilenze yakho. Abesifazane ngezikhathi zonke nezizwe babefuna ukuba zihle, baqoqa ngokucophelela izindlela zokuhle, babegcinwe futhi banikezwe ngezizukulwane ngezizukulwane. Siqoqe zonke izimfihlo zobusha nobuhle, uzomangala ukuthi kulula kanjani ukuba kuhle. Ukunakekela isikhumba esifanele kuzokwenza isikhumba sakho sibe mnandi futhi sibe mnene, futhi ukunakekelwa komzimba kuzothola isibalo esinobuhle, esihle nesincanyana.
Izinyathelo ezilula ubuhle bomzimba nomphefumulo
Bonke abesifazane bafuna ukuba bahle, futhi bahlale belalela izeluleko ze-cosmetology, ukuthi bangaba kanjani efiselekayo futhi ezinhle. Into eyinhloko ekhanyiswayo, umzimba wayesezingeni, futhi isikhumba sasihamba kahle. Inombolo enkulu yezimfihlo zokufeza ubuhle obuhle, lezi zimfihlo zilula kangangokuthi aziyikuzisebenzisa. Ngomzimba, ukuqeqeshwa kubaluleke kakhulu, futhi uma umuntu enomsebenzi omncane wokuphila, ukulahleka kwe-tonus akunakugwemeka. Amantombazane ahlala kulabo abaqaphele izinsuku, akhohlwa ukuthi imisipha yabo ingaba ne-atrophy. Udinga ukutshela umqeqeshi wakho ukuthi unesikhathi esincane namandla, futhi uzothatha uhlelo oluphumelelayo nolufushane. Uhlelo olunjalo lungenziwa ngesikhathi sakusihlwa nangezimpelasonto, futhi ukuqinisa ukuzivocavoca umzimba kuzosiza izinqubo ze-SPA noma ukusikhipha.
Akuzona zonke izintombazane ezifuna ukucindezeleka, ngakho-ke udinga ukubeka imali kuma-finances nokuya njalo kwi-cosmetology izifundo. Ungakwazi ukuqinisa imisipha futhi uqinise isikhumba hhayi esikoleni sokuzivocavoca, kodwa esihlalweni esihlelekile salon beauty.
Kuyinto efiselekayo ukuphatha umzimba emangqamuzaneni afile futhi lokhu kungenziwa ngempumelelo enkulu ekugezeni kwakho. Ushukela noma ikhofi, eyongezwe ukhilimu omuncu, kwenye imifino enamafutha, emafutheni omnqumo, isebenza izimanga. Kuzothatha imizuzu embalwa ngenkathi ugeza. Lezi zinqubo kufanele zenziwe njalo, emva kokukhishwa kwe-exfoliation ukuze unciphise umzimba ngamaski, ama-creams angcolisayo, ama-wraps.
Kuyoba ngcono uma uya olwandle, lapho imvelo ngokwayo iyokwenza umsebenzi wayo, futhi noma yikuphi owesifazane uzobuya ngokuhle futhi aphumule. Ungahamba ngokuvakasha komzimba ogwini olunoma yiluphi olwandle, lapho umsoco nomqeqeshi bayoqapha ukuthi yonke imiyalelo ilandelwa kanjani. Futhi ukuletha umphefumulo nomzimba ngokuhlelekile, uhambo oluya e-sanatorium, okucacile okuhlobene nokuvumelana nobuhle, kuzokusiza. Imisebenzi enjalo ngaphansi kokuqondiswa odokotela isisindo esiyinkimbinkimbi emzimbeni, futhi udinga ukutshala imali, futhi udinga ukwenza lokhu njalo.
Ubuso obubushelelezi nezinwele zezinwele zingagcwalisa isithombe sezinkulunkulukazi. Izinwele zazikhanyayo futhi zibeke izindwangu zokulalela, udinga ukuxhumana nomuntu okhanda izinwele futhi usebenzise imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele zekhwalithi. Kodwa lo muntu udinga ukunakekelwa kwansuku zonke: ukuhlunga nokuhlanza. Udinga ukulinganisela ekudleni, sebenzisa uketshezi oluwusizo kakhulu, khona-ke kusukela esibukweni njalo ekuseni uzobuka owesifazane, ukhanyise ngobuhle nenjabulo. Emva kwakho konke, isimo sengqondo esihle sisebenza nezimangaliso.
Ukupheka ukunakekelwa kwezinwele kusuka emazweni ahlukene
Izinwele ezimnandi kwakuhlale ziwuhlobiso nokuziqhenya owesifazane. Sikunikeza izindlela zokunakekelwa kwezinwele emazweni ahlukene
Ukuze uqinise izinwele, uthele izipuni eziyi-6 ze-oatmeal ngenani elincane lamanzi abilisiwe, engeza ama-walnuts ambalwa achotshoziwe, i-spoonful of honey. Shiya le remedy ebusuku. Ekuseni, gubha khona i-apula enkulu, faka ama-apricot omisiwe aqoshiwe kanye nezinkezo ezimbalwa ze-ukhilimu. Futhi uxube futhi udle ukudla kwasekuseni.
Ukuze ugijime kahle ama-blondes ezinwele, bahlanza nge-infusion ye-chamomile. Ukuze wenze lokhu, uthele izipuni ezimbili zezimbali ze-chamomile ngetitha elilodwa lamanzi abilayo bese upheka imizuzu engu-5 noma engu-7 emlilweni omncane, ugxilile ku-thermos, uhlile futhi uhlungiwe. Nsuku zonke, nge-infusion ekulungele, izinwele ezihlanziwe futhi zisula ithawula. Ngemuva kwamasonto owodwa noma amabili, izinwele zathola i-tide enhle yegolide, futhi yayinobubele kunesilika.
E-England, ukukhanyisa izinwele, sebenzisa uju namaqanda. Sithatha amaqanda ama-2, sihlukanise ngokucophelela izikhupha ezivela kuma-protein, sizothatha izikhupha nge-isipuni esisodwa soju. Sizofaka ingxube ezinwele ezimanzi bese siwageza kahle emva kwemizuzu emihlanu.
EMexico , inhlonipho ye-aloe. Ijusi layo liqukethe inhlanganisela yokuphulukisa yamavithamini kanye nama-microelements, okudingeka kakhulu izinwele ezimele, ezinomile. Uma indlu yakho ine-aloe, engaphezu kweminyaka engu-3 ubudala, khona-ke udinga ukuthatha amaqabunga aphansi kuwo. Futhi ngaphambi kwalokho, ungamanzi lesi sitshalo izinsuku ezimbili. Amahlamvu ageze ngamanzi abilisiwe, asuse ameva bese uwasika ube yimichilo emincane, uwafake nge-gauze, bese ushaya ijusi. Sebenzisa ijusi le-aloe ngemuva kokugeza izinwele zakho, wanezela emanzini ukugeza izinwele zakho.
EJapane, ukunakekelwa kwezinwele, irayisi isetshenziswa. I-mask eyenziwe ngelayisi, eyenzelwe zonke izinhlobo zezinwele, ukulwa nama-dandruff, ukubuya kukhanya kubo. Thatha izipuni ezimbili ze-rice vodka, uhlanganise ne-isipuni esisodwa soju kanye nejusi nge-1 lemon. Inhlanganisela isetshenziswa enhloko imizuzu engu-15 noma engu-20, bese izinwele zihlanza kahle.
Kusukela esikhathini esidlule, eBulgaria , ukuze izinwele zibe nephunga elimnandi, ama-rose amacembe asetshenziswa. Wawulungiselela ngokushesha nje lapho izimbali ziqala ukubuthwa, ziqoqa izikhalazo zazo, zanisela amanzi abandayo futhi zafaka endaweni emnyama izinsuku ezimbili. Bese bathululela ukumnika i-atomizer, bayigubha kancane futhi ngemva kokugeza, bafafaza izinwele ezimanzi. Iphunga lama roses lihle, liveza ama-hormone enjabulo.
Velvet izandla zakho
IsiNgisi sithi owesifazane weqiniso ovela kumfazi olula uhlukaniswa ngezandla zakhe. Bahlale bebona, kufanele basebenze ekushiseni, emanzini, emakhazeni, nge-detergents kanye nama-agent wokuhlanza. Futhi, naphezu kwalokhu, badinga ukuzinikela isikhathi sokugcina izandla zabo zihle kahle.
Mask of izandla Aloe
Ukuze imaski udinga isipuni esingu-1 se-aloe juice, ama-gramu angu-45 we-lanolin ukhilimu kanye ne-1 isipuni samafutha omifino. Ukuze uthole i-mask protein udinga ukuthatha ithisipuni lesine likasawoti, 2 amathisipuni amaqanda amhlophe.
I-Lanolin ukhilimu ihlangene nejamu lemon bese igubha. Ekubunjweni okwenziwe sinezela amafutha emifino. Ingxube ifakwe esimweni esihambisana naso. Ukuze ulungise amaprotheni amaningi, usawoti uphuphuka ngeqanda elimhlophe. Faka i-mask esikhumbeni bese uyishiya imizuzu engu-10 noma engu-15. Bese ususe nge-cotton pad, bese usebenzisa amaprotheni amaningi. Futhi emva kwemizuzu engu-10 sizohlanza isikhumba sezandla ngokumnika kwamakhemikhali (isibonelo, sage noma i-wort St. John's) bese siwugcoba ukhilimu onomsoco.
Bhati ne-arnica intaba
Thatha 2 wezipuni of imbewu fennel, entabeni arnica, chamomile izimbali, yarrow, peppermint oqoshiwe. Senza utshani ngamanzi abilayo abilayo futhi sifaka amahora amabili. Ukumnika ukuphumela kuhlungwa. Sibamba izandla ekugezeni imizuzu engu-15 noma engu-20.
Thatha izipuni ezingu-3 eziqoshiwe zokuzala, izipuni ezingu-5 ezihlanjululwe i-valerian, i-peppermint, i-shoot shots eqoshiwe kanye nelitha elilodwa lamanzi.
Umswakama obangelwayo uzogcwala ngamanzi abilayo bese ubambelela emaminithini angu-45, bese sikhathazeka. Beka izandla zakho phansi imizuzu engu-20.
Ukugeza ngesandla ngamehlo amathathu amaqabunga
Thatha izipuni ezingu-5 zokulinda amaqabunga amathathu, amaqabunga e-peppermint, izipuni ezingu-6 zomcibisholo oqoshiwe we-valerian, ilitha lamanzi.
Ingxube izogcwala ngamanzi abilayo futhi ifinyelele isigamu sehora. Beka izandla zakho ebhodini ngamaminithi angu-20. Khona-ke sizokwehlisa izandla nge ukhilimu okunomsoco.
Ukunakekela imilenze ephelele
Ukuze uqinisekise ukunakekelwa kwezinyawo okufanele, akudingeki ukuthi usebenzise imali njalo ngezinqubo ezahlukene noma uya endaweni ye-spa. Kungenziwa ekhaya. Sinikeza zokupheka ngamanzi okugeza, izinyawo ezinyawo.
Imisindo evame ukumelana nesisindo idinga ukunakekelwa okuhle kakhulu. Mhlawumbe, uthanda umuzwa ohlala emva kwakho uhamba eduze kolwandle, khona-ke uzothanda umuzwa wokuvutha nokubushelela.
Hlanganisa izinkomishi ezingamatshumi amahlanu omunyu wosawoti, amaconsi ama-10 wamafutha emifino, amahlumela angu-10 wamafutha omnqumo kanye namaconsi angu-10 wamafutha anamakha (rosemary, lavender) ukwenza i-paste ehambisanayo. Ubuningi obumphumela busetshenziselwa ukugeza okufudumele okufudumele esikhunjeni samanzi ezinyawo. Bese ubuyela imizuzu embalwa yonyawo, hlambulula ngokufudumala, bese usuka ngamanzi abandayo futhi usebenzise ukhilimu onomsoco.
Ukuze unakekele kahle izinyawo zakho, awudingi kuphela ukuwageza nsuku zonke. Udinga izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto ukwenza izinyawo zamanzi ezinyawo, ezizohlanza ngokujulile isikhumba. Ukuze senze lokhu, sithelela amanzi ashisayo esihlalweni esikhulu, engeza isikhumba sobhuku. Ukuze unciphise kangcono isikhumba sezinyawo kanye ne-foam, engeza izinkezo ezimbalwa zolwandle usawoti. Beka izinyawo zakho epulini imizuzu engu-15. Emva kokugeza, gcoba izinyawo nge-pumice, ubomise ithawula, bese usebenzise ukhilimu omuncu.
Ukuvimbela ukuhlunga, ukuqhekeka, ukuze isikhumba semilenze sibe lithenda, sithande futhi siphumelele, senza iresiphi enjalo: mix 2 izinkomishi isitashi nge 3 amalitha amanzi. Ubilise lesi sombululo, uphuze kancane futhi ugijime kuwo ngamaminithi angu-20. Bese ugeza izinyawo zakho ngamanzi afudumele futhi apholile, sula kahle futhi usebenzise ukhilimu omuncu.
Moisten bese unciphisa imilenze yalesi lokugeza: thatha 1.5 amalitha amanzi abilayo nezipuni ezintathu ze-inflorescences ze-chamomile kanye namaqabunga omama nomama, ugcwalise ngamanzi abilayo bese uqinisa imizuzu engu-15, ubunzima, engeza ilitha lamanzi afudumele. Sithatha ukugeza okunjalo ngamaminithi angaba ngu-20.
Uma isikhumba semilenze somile, khona-ke inqubo elandelayo iyoba usizo kubo: thatha izipuni ezintathu noma ezine ze-soda bese wengeza ama-3 amalitha amanzi. Sithatha lokhu kugeza nsuku zonke.
Thuthukisa ukujikeleza kwegazi, ukunciphisa ukukhathala nokugeza okufudumele kwansuku zonke ngokufaka i-flaxseed. I-Salting 2 wezipuni we-flax imbewu 1 litre yamanzi abilayo, sisho ihora elilodwa. Kulesi ukumnika, engeza amanzi afudumele. Sithatha ibhuku lokugeza ngamaminithi angu-10 noma angu-15. Siphinde senze amabhati ahlukene, bese sinciphisa imilenze yethu emizuzwini emibili noma emi-3 emanzini ashisayo, bese sibamba izinyawo zethu emanzini abandayo imizuzwana embalwa. Emanzini ashisayo sengeza ukumnika kwe-flaxseed.
Isikhumba semilenze siyoba sesisindeni futhi siqiniswe uma ugeza. Thatha izingxenye ezilinganayo amaqabunga e-birch, inambuzane, ijika, i-thyme, uxube ama-herbs bese uthatha ½ inkomishi yexube ye-herbal uphinde uphuze ngamanzi ayisitha. Sifaka imizuzu engu-20 noma engu-30. Thela lo mhluzi emgodleni, engeza amalitha amabili amanzi afudumele, bese uthatha ibhuku lokugeza ngamaminithi angu-25. Amabhati anjalo athathwa izikhathi ezine ngesonto.
Ukunakekelwa Kwesikhumba Kwezingxube
Izithende ezinomthelela, ezibomvu nezithambile ziyisibonakaliso somzimba olungiselelwe kahle. Kwabesifazane abathile, ukunakekelwa kwesithende kuyinkinga enkulu. Kodwa lokhu kuwumsebenzi ongenakuqhathaniswa akufanele ube novilapha, futhi uthathe izinqubo ezihlukene: okugeza ngezingxube ezihlukene, amaski, ukubhusa kanye nezimonyo. Futhi uma wenza lokhu, njalo, futhi hhayi ngezikhathi ezithile, uzobe uphumelela, futhi izithende zakho zizobe zine pink futhi zithenda.
Indlela yokwenza izithende zibe lula?
Inqubo ephumelelayo ibhati lokugeza ngezinyawo ezahlukene, usawoti, isobho kanye ne-soda, kudingeka kwenziwe njalo ngemva kwamasonto amabili, imilenze kufanele ibanjwe okungenani imizuzu engama-40. Kodwa uma ungahlanzeki njalo isikhumba sezithende zakho, bese uthola umphumela oyifunayo ngeke uze. Imisipha sizoqhuma emanzini okugezela futhi siqede ngokucophelela uhlaka oluyinkimbinkimbi yesikhumba nge-brush pedicure, ipumice. Uma le ndlela yokuhlanza isikhumba sezithende, khona-ke inqubo izosebenza kangcono.
Uma, ngenxa yokushisa i-sunbathing nokugeza, isikhumba siphelelwe amandla, khona-ke imaski izosiza. Thatha ithisipuni elilodwa lejusi kalamula bese sizothatha ingxenye yesipuni yamashukela nge-isikhupha samaqanda. Sakaza imilenze bese ufaka imaski ezithende kuze kube yoma. Sisusa umthamo we mask ngamanzi bese uhambisa izinyawo nge ukhilimu.
Sisusa isikhumba esinamahloni ngalezi zithende: ngobusuku sizoqhuma imilenze yethu emanzini okugeza noma ku-bath-soda bath. Kusukela ku-anyanisi, silungiselela i-compress bese siyinamathisela ezithende. I-bulb obdad amanzi abilayo aphelile, uthathe isigamu bese ubeka izithende. Sifake isithende ngesikhwama seplastiki bese sigqoka amasokisi e-woolen. Ekuseni sisusa izinsalela ze-anyanisi, sisusa isithende ngamatshe e-pumice bese sisebenzisa ukhilimu olunamafutha. Uma wenze izinqubo ezimbalwa, awuqapheli izithende zakho, isikhumba sizobe sesithambile futhi silula. Umphumela omuhle uzoba uma ubusuku befaka izithende ze-cream okhilimu, gqoka imilenze nge-polyethylene, bese ufaka amasokisi. Futhi ekuseni, cwilisa imizuzu engama-20 bese ubeka izithende ngamatshe e-pumice. Uma wenza lokhu nsuku zonke, ungasusa isikhumba esinzima sezithende zakho kuze kube phakade.
I-Zucchini - indlela yokunciphisa izithende. Zucchini oqoshiwe noma oqoshiwe, udinga ukunamathisela isigamu sehora kuya ezithendeni, bese ugeza ngamanzi afudumele bese usakazeka nge-cream cream. I-mask idinga ukwenziwa kanye ngesonto, lokhu kuyokwanela ukwenza isikhumba sibe buthaka futhi busheleleke.
Mask kusuka kuma-apricot . Thatha ama-apricot amasha, engeza ama-2 noma ama-3 amaconsi amafutha omnqumo, ukuxuba nokushisa ngomlilo. Sizofaka imaski efudumele ezithende bese siyifaka nge-polyethylene bese siyibopha imizuzu engu-30 noma engu-40. Bese ugeza imaski ngamanzi abandayo.
Manje siyazi ukuthi ubuhle buyini, ukunakekelwa komzimba, ukunakekelwa kwesithende. Ukuqaphela lezi zokupheka ezilula nokunakekela umzimba kanye nezithende, ungazuza umphumela omuhle. Khona-ke isikhumba somzimba nezithende sizoba mnandi futhi sibe mnene.
Amathiphu awusizo wokunakekelwa kwentamo nobuso
Iyini ukusikhipha kwe-Slavonic yakudala futhi uma isetshenziswa
Ukwelapha nge-waropopy warts
Amathuba okuhlinzwa epulasitiki
Ungenza kanjani indwangu yesetafula itafula lonyaka omusha?
I-Honey roll nge imbewu ye-pepper ne-poppy
Izinyathelo ezilula ekuqeqesheni
Ungayinakekela kanjani isikhumba nxazonke?
I-trailer yefilimu "ama-shade ama-50 we-gray" yakhululwa 2 ingxenye (bona ividiyo nesithombe)
Indima kayise ekukhulisweni kwezingane, ukweluleka kwabazali
I-aloe yesitshalo esingaphakathi
Imisebe yelanga emkhakheni we-temperate
Ushizi frittata onamatamatisi
Indlela yokuziphatha uma umngane ehlangana ne-ex yakho?
Amandla omlingo woju: ukuhlelwa kochungechunge olulodwa lwe-Guerlain u-Abeille Royale